Waxa jira wax badan oo dhibaato mug in aad leedahay ayaa laga yaabaa inay ula tartami aad iPhone. Laga soo bilaabo tayada mugga wac hooseeyo si ay dhammaan dhawaaqyada aad qabka telefoonka ah oo tayo leh u hooseeya. Haddii aad ka cabanayeen mid dhibaato mug iPhone ama mid kale, keligaa ma tihid. Dhibaatooyinkaas jira wax badan oo caadi ka badan aad u malaynayso. Nasiib wanaag idiin, wax badan oo ka mid ah ayaa loo hagaajin karaa.
In ruuxa aad ka caawinaya, waxaan doonayaa in aan wax ka qabtaan dhowr ka mid ah dhibaatooyinkan iyo sidoo kale idinku Arzaaqay arin u fududahay kasta. Sidaas marka xigta, aad iPhone ee mugga waxaa ay kor u sii hayaha, isku day mid ka mid ah, kuwaas oo xal.
1. Marka mugga Call aad iPhone tahay
A mugga wac yar yahay waxay noqon kartaa dhibaato niyad gaar ahaan marka aad isku dayayso in ay fahmaan qofka kale on line iyo aad u dhawrtid wax weyddiinaya in qofku ku celceliyo. Ma aha in aad adkaysan mugga this tayo hooseeyo mar dambe. Si fudud u raacaan talaabooyinkan si ay dib ugu heli aad mugga.
Tag goobaha aad iPhone oo markaas garaac General Tab ah, ka dibna hoos tuubada doorasho ballaaran ee Helitaanka.
Tallaabada ugu soo dhaafay waxaa curyaamo joojiyo Phone qaylada iyo tan ogolaan doonaa telefoonka iska indha dhan Goynta soo socda si aad iPhone iyo saamaynta hagaajiyo mugga yeedho.
2. Marka Volume Music ku saabsan iPhone aad u cod weyn
Marka aad si fudud uma fahmi karaa sida ay u diidi mugga aad iPhone, waxaad isku daydaa inaad fudud xal.
Tag goobaha aad telefoon. Riix General dibna Helitaanka. Marka halkan guji "Qalabka gargaarka maqalka" Daar Qalabka Gargaarka Maqalka. Tani waxay kor u qaadi doonta mugga afhayeenka laakiin waqti isku mid ah dami "Tirtiridda Qaylada Phone" taas oo had iyo jeer on by default.
3. Maxaa dhacaya haddii ma maqli karaysaane dhawaaqa haba yaraatee?
Dad badan ayaa waxay soo sheegeen oo aan maqlay dhawaaqa kasta oo ay iPhone. Iyada oo ku xidhan tahay waxa aad doonayso in aad qabato, waxa ay noqon kartaa rajo aad u cabsi isticmaala inta badan. Aamusay iPhone Tani waxaa keeni kara xaqiiqda ah in aad iPhone waa ku xayiran on hab headphone. Waxaa jira sababo badan oo ah sababta ay tani u dhici kartaa. Waxaad gelin kara taleefanka on hab headphone, waxay illoobeen inay u burburin lahaayeen. Sabab kasta, dhibaato ma laha in la curyaamiyaa. Halkan sida inaan ku saxno.
Haddii aad aragto icon ah taas oo u eg tan on iPhone marka aad isku dayaan in ay qabsadaan badhamada mugga aad, waxaa laga yaabaa inay wax ku xayiran dekadda headphone ah.
Si loo xaliyo fiilada dhibaatada iyo dib-u-furaysto dhagaha dhowr jeer. Xitaa Waxaad isticmaali kartaa fidhicil ah si ay xoogaa ka jabay Jack headphone ama wax kale ku xayiran dekadda saarto.
Si kale oo aad u fudud inuu ka baxo habka headphone waa in la joojiyo oo iPhone. Riix badhanka Hurdada iyo Button Home wada ilaa aad ka aragto Logo Apple ah.
4. Marka aanad lahayn dhawaaq kasta oo xitaa Chine
Mararka qaarkood waxaad u baahan tahay xal u daran oo joogto ah u dhalna ma lahayn dhawaaq aad telefoonka. Soo celinta aad iPhone on Lugood ayaa u shaqayn jiray dad badan. Halkan sida loo sameeyo.
Marka aad ku xiran yihiin Lugood, guji soo celiyo. Tani waa dib buuxda oo qalab aad markaa waa inaan u badan tahay in la sheego in aad doonaysid in aad lumiso oo dhan xogta aad ka mid yihiin sawiro, muusig iyo xiriirada. Sidaas daraaddeed taasu waxay bixisaa haddii aad gurmad xogta aad ka hor inta aadan tan sameyn. Waxaa sidoo kale waa hab heer sare ah oo waxtar leh si loo xaliyo wax kasta oo kala carar aad telefoon laga yaabaa in ay ka mid yihiin codka dhibaato.
5. Marka Sound baaba'aa ka dib markii aad ka soo xirto ka saari iPhone ama ka saar headphones ah
Mararka qaarkood aad iPhone waayi kartaa dhawaajiyaan si degdeg ah ka dib markii aad un-xirto ama ka saar headphones ka Jack codka. Xaaladdan oo kale, dhibaatada waxay noqon kartaa gebi ahaanba hardware la xiriira. Waxaa sabab u noqon kara silig ka khasaara in isku xirnaanta ka dhalanaya in aanu cod laheyn. Waxaa jira dhowr wax oo aad sameyn kartid si aad u xaliyo dhibaatadan. Isku day inaad soo socda ilaa wax ka shaqeeyaa.
• Dib-u-xirto iPhone ka dibna waan ka qaadaynaa. Tani waxay shaqeyn karaan gaar ahaan haddii kaliya waa Dicumintiyo ah software yar oo aad telefoonka nooca kaliya u baahan yahay qaadista ii soo.
• isla headphones Ma. Mar kale Dib-u-fur, ka dibna ka saar. Iyada oo ay hoos u headphones unplugged ama la kordhiyo mugga iyo arki doonaa waxa dhaca.
• Mararka qaar boodhka lagu fara karo iyada oo aad dhawaaqa. Sidaa darteed, cadaydo siigada ka isku xira dekedda oo la arko in this ka shaqeeya. Boorka ayaa lagu yaqaano in ay khayaanaan software galiyey aad iPhone ayaa weli soo xirtey.
• Haddii dhan kale ku guuldareysto, isku day resetting telefoonka in lagu mutaysanayo gudasho la'aanta goobaha isticmaalayo tallaabooyinkan soo socda.
Tag Settings, Riix General dibna celi. Daaqadda sababtay, Riix masixi Content oo dhan iyo goobaha. Sanduuqa A digniin cas ayaa qori doonaa "masixi iPhone." Tubada on this
Wax walba oo aad telefoon laga tirtirayaa marka hubi inaad tan sameyso oo kaliya haddii aad abuuray gurmad ah oo ka kooban dhan. Laakiin tan ugu muhiimsan oo aad iPhone dib ugu laaban doonta goobaha warshad iyo arrimaha codka waa in la hagaajiyo.
> Resource > iPhone > Common iPhone Dhibaatooyinka Volume iyo sida loo dayactir